what, when, why: भाईरस भनेको के हो ?? ( What is Virus)
भाईरस भनेको के हो ?? ( What is Virus)
कम्प्युटर भाईरस कुनै जिवित किटाणु नभै एक गलत प्रोग्राम हो जसले कम्प्युटरको सँचालन प्रणालिमा हानी पुर्याउने कार्य गर्छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यो गलत निर्देसिकाहरुको समुह हो जसले कम्प्युटरको सँचालन प्रकृयालाई बिगारी दिन्छ । कम्प्युटर भाईरस बिशेष गरी कम्प्युटर प्रोग्रामिङका दक्ष्य ब्यक्तिहरुले गलत मनसाय पूर्वक तयार गरेका हुन्छन । कम्प्युटर भाईरसलाई पनि एउटा सफ्टवयर वा प्रोग्रामकै रुपमा लिन सकिन्छ तर यस किसिमका प्रोग्रामहरुले कम्प्युटरलाई कुनै राम्रो कार्य नगरि हानि पुर्याउने काम मात्र गर्छ । ... ... क्रमश
भाईरसका प्रकारहरु (Types of Virus) भाईरस बिभिन्न प्रकारका हुन्छन र हाल सम्म देखा परेका भाईरस्को सँख्या भन्नु निकै गार्हो हुन्छ किनकी प्रतिदिन यसप्रकारका भाईरसहरुको बिकास भई रहेको पाईन्छ । तापनि यस्ता भाईरसलाई यसले गर्ने असरको आधारमा समुहगत रुपमा बिभाजन गरेको पाईन्छ ।
क) Time Bomb : निस्चित समयमा कार्य सुरु गर्ने प्रकारको ।
ख) Trojon Horse : लुकेर कुनै प्रोग्राममा रहने प्रकृतिको ।
(बाँकी अँशको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला)